Ministry Partners in Zimbabwe Have God-Sized Plans for 2019 | The Tide
We have had a presence on radio airwaves in Zimbabwe since 1983, and 2019 will be a big year for listeners in the African nation who are hungry to learn more about Jesus.
“Even though many Zimbabweans identify as Christian, some still engage in traditional African religious practices including ancestral spirit worship and witchcraft,” said Director Don Shenk, who was born in then-Rhodesia to missionary parents and lived in Zimbabwe for 28 years. “While Zimbabwe has been fairly extensively evangelized, there are still many who need to hear the Gospel message, and with the many doors God has opened there, the possibilities for The Tide ministry and our partners in 2019 are endless.”
The Tide radio partners in Zimbabwe also have the goal in 2019 to reach listeners on a personal level by visiting them where they live. Visiting rural districts such as Binga, Gokwe, Gwanda, Plumtree, Hwange, Victoria Falls, Beitbridge and Filabusi will enable The Tidepartners to preach the Gospel in person with traveling pastors who will hand out literature created specifically for these gatherings.